गोल्जुङबेशीको मल्लकालीन दरबार भग्नावशेष, संरक्षण खै ? -
गोल्जुङबेशीको मल्लकालीन दरबार भग्नावशेष, संरक्षण खै ?
३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार १८:४२ । रसुवा
पुरातात्विक वस्तु, मठमन्दिर, गुम्बा सांस्कृतिकको धरोहरा हुन, नेपाल । रसुवा विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक संस्कृतिको धरोहरा हो । जहाँ विभिन्न पुरातात्विक मन्दिर, दरबार रहेका छन् । करिब दुई सय पचास बर्ष पूरानो मल्लकालीन मन्दिर र दरबार यहाँ रहेका छन् । आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकास्थित गोल्जुङबेशीमा रहेका यो दरबार अहिले भग्नावशेष अवस्थामा रहेको छ । पछिल्लो यो स्थानीय सरकारलाई न वास्ता छ, न सम्बन्धित निकायलाई नै यसको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । यो केवल अहिले जिर्णाेदार अवस्थामा रहेको छ ।
पाटनको अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ललाई पृथ्वीनारायण शाहले हराएपछि उनका उतराधिकारी आफ्नो केही जनतालाई लिएर ज्यान जोगाउदै रसुवाको गोल्जुङवेशीमा राज्य खडा गर्न आएको उल्लेखित इतिहासमा छ ।
आमाछोदिङमो गाउँपालिका-४ गोल्जुङबेशी निवासी एवं बोर्डिङ संचालक बालकृष्ण श्रेष्ठले सो स्थानमा रहेको पिपलको रुखमुनि नारायणको मुर्ति रहेको बताए । उनले त्यसबेला त्यहाँ नेवारको बस्ती रहेको अनुमान लगाउन सकिने बताए । लुकेर राज्य गरेको हुँदा राजाहरुले आफ्नो बास्तविक नाम लुकाएर गोल्जुङबेशीमा राजाहरुले आफ्नो नाम लुकाएर गुल्मराजा र जोङघाङको राजाले उमराजा राखेको थियो । तर आफुलाई मल्ल राजा भनि परिचय नदिएको अवस्था रहेको थियो । यहाँ पाटनबाट श्रेष्ठ, कायश्थ जोशी, प्रधान, आदी घरका नेवार रहेका छन भने ति राजाले आफ्नो कुल पुजा गर्न नारायण भगवानको मुर्ति स्थापना गरेको भाई रहेको छ । गोल्जुङवेशीमा बस्दा पनि आफ्नो कुल धर्म छोड्न हुदैन भनेर नारायणको मुर्ति स्थापना गरेर पुजापाठ गर्ने गरेको र यस ठाउँमा राज गरेको भन्ने इतिहासमा उल्लेख छ ।
यहाँ दुई भाई राजाको दरबार थिए । एक भाई गोल्जुङवेशी भन्दा करिव ३ किलोमिटर दुरीमा पर्ने जोङघाङ भन्ने डाँडामा दरबार बनाएर बसेका थिए । स्थानीय भाषामा ‘जोङ’ भनेको दरबार र ‘घाङ’ भनेको डाँडा हो । त्यसैले यसलाई दरबार डाँडा भनेर चिनिन्छ । यहाँ पृथ्वीनारायण शाहलाई आक्रमण गरी दुई भाइलाई नै मारेर भएभरको सम्पत्ति लुटेर लगेको धेरै नेवारहरुलाई सम्हार गरेको भन्ने भनाई रहेको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।
१९९० सालको भुकम्पले यो दरबार र मन्दिर भत्किएको छ, श्रेष्ठले भने दरबारको जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा ल्याइसक्यो । घले राजाको दरबार भनिसकेपछि यस्तो ऐतिहासिक पुरातात्विक आस्थाको धरोहर लोप हुने अवस्था आएपछि प्रचारको खोजी गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
यहाँ राजधानीबाट सानो तथा ठुलो गाडीमा सजिलै एकदिनमा नै पुग्न सकिन्छ ।
गुमनाम रहेका ठाउँहरु जिल्लाभित्र धेरे छन्, रसुवा नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ बताउँछन् । यस्ता पुरातात्विक धरोहराको खोजी र संरक्षण गर्न जरुरी छ, उनले भने, दरबारको पुननिर्माणको लागि पुरातत्व बिभागको ध्यानाकार्षण गर्नु जरूरी छ ।
उतिबेलाको मल्लकालिन दरबार थियो । अहिले भग्नावशेष मात्र रहेको छ । गणेश तथा भिमशेनको मन्दिर रहेको छ । नारायणको मन्दिर लगाएत नागको थान समेत रहेको पवित्र भुमलाई संरक्षण र संबद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारको खाँचोको विषय हो । अझ यस स्थानको विस्तृत जानकारीको लागि बालकृष्ण श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा सबै इतिहास आउने स्थानीयको भनाइ थियो ।
यस स्थानको संरक्षणमा स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका रहनुपर्ने बताउँदै रसुवा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सन्जिव अमात्यले आफ्नो पनि सक्दो सहयोग रहने बताए ।
यो ठाउँ एकदमै गुमनाम छ । कमभन्दा कम मानिसलाई मात्र थाहा छ । उचित प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेको यस नारायण मन्दिर र दरबारको संरक्षण गरेर आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरा जोगाउन सबै क्षेत्रहरुबाट लागिपर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले ओझेलमा रहेका यस्ता पुराना स्थानको संरक्षण गरी प्रचारप्रसार गरे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले लागि नयाँ गन्तब्य बन्न सक्नेछन् ।
इतिहास मेटिदैन गएपछि आस्था र अस्तित्व मेटिदै जान्छ । त्यसैले आस्थावान वस्तुलाई जिवन्त राख्नुपर्दछ । ऐतिहासिक, धार्मिक भौगोलिक एवम् प्राकृतिक महत्व बोकेको यस ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटकिय हिसावले पनि यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य वन कार्यालय अन्र्तगत पर्ने ठाउँ भाषा संस्कृतिहरु पनि त्यति नै महत्व रहेको छ ।
पार्वतीकुण्ड र दुधकुण्डको महिमा
सार्की समुदायलाई जीवन चलाउन गाह्रो
काठका ठेकी बनाउने सीप संरक्षण गरिँदै
फलहरूको राजा आँप, ‘अल्टरनेट बियरिङ’ का कारण कम उत्पादन
रुदानेसँग जोडिएका अपत्यारिला प्रसंगहरु
समृद्ध काभ्रेको सूचक : राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
१. मगर भाषाको पाठ्यपुस्तक प्रकाशित
२. गरगहना परीक्षणमा क्षमता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
३. प्रधानमन्त्रीमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’
४. एक व्यक्तिले दुई सिम मात्र राख्न पाउने
५. दोलखामा दाइले गरे भाईको बलात्कार
६. कोरोना अपडेटः विश्वभर ६० लाख कोरोनामुक्त